औषधि खाने पैसा पनि नराखी कलेजलाई दान दिएको घर दुर्व्यसनीकाे अड्डा, २६ दिनमा कुकुरको उद्धार (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
औषधि खाने पैसा पनि नराखी कलेजलाई दान दिएको घर दुर्व्यसनीकाे अड्डा, २६ दिनमा कुकुरको उद्धार (भिडियो)
काठमाडौं । आज न्युज २४ टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को २६४ औं एपिसोड हो । आजको यस एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै फोन कलमार्फत समस्याहरुको समाधानको लागि कुराकानी पनि गरिएको छ ।
आजको यस विशेष एपिसोडमा निम्न शिर्षकमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः
१. आजको कार्यक्रमको यस विशेष एपिसोडमा ‘भद्र कुमारी घलेले पशुपति क्याम्पसलाई छात्रावासको लागि दिएकीे भवनको वेवास्ता’ शिर्षकमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
काठमाडौं चावहिलस्थीत पशुपति क्याम्पसको लागि भद्र कुमारी घलेले दान दिएकी २२ कोठे विल्डिङ अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ । घले दोस्रो पटक पशुपति क्याम्पसको अध्यक्ष हुँदा पशुपति क्याम्पसको महिला छात्रवासका लागि भन्दै क्याम्पसलाई दान दिएकी थिइन् ।
२. आजकै एपिसोडमा ‘२६ दिन देखि नदीको बिचमा फसेको कुकुरको ७ घण्टा लगाएर उद्धार’ शिर्षकमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
केहि दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा म्याग्दीस्थीत कालीगण्डकी र रहुगंगा नदिको विचमा फसेको कुुकुरको तस्वीर भाइरल भएको थियो । तस्वीर भाइरल भएपछि म्याग्दीका युवाहरुले शुक्रबार ७ घण्टा लगाएर नदिबाट कुकुरको उद्धार गरेका छन् ।
३. आजकै एपिसोडमा ‘पर्वत जिल्ला अस्पतालका डाक्टरले नभाँचिएको हातमा प्लास्टर गराएपछि…’ भन्ने शिर्षकमा पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
पर्वत जिल्ला अस्पतलालले भाँचिएको भनेर प्लाष्टर गरेको हात कास्की पोखरको फेवा सिटी अस्पतालले नभाँचिएको भनेर एकदिनमै प्लाष्टर फुकाइदिएपछि पर्वत अस्पतालका डाक्टर माथि प्रश्न खडा भएको छ । कुस्मा नगरपालिका ६ का रोसन बराल बाधरुम लडेर हात सुन्निएपछि पर्वत अस्पताल पुगे । अस्पतालमा एक्सेरे गर्दै डाक्टरले २ ठाँउमा नसा भाँचिएको भन्दै प्लाष्टर गरिदिए ।
४. यसका साथै आजकै एपिसोडमा ‘रिचार्ज कार्डको पैसा उठाएर भागे बाजुराका विरेन्द्र बहादुर’ भन्ने शिर्षकमा पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाजुराका विरेन्द्रवहादुर धामीले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग लाखौ रुपैया उठाई फरार भएका छन् । मोवाईलका रिचार्ज कार्डहरुको सप्लाई गर्ने धामीले विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुसँग थप रिचार्ज कार्ड किन्न भनि पैसा उठाई फरार भएका हुन् । रिचार्ज कार्डका लागि दिएको पैसा लिएपछि सम्पर्क विहिन भएपछि पीडितहरु हाम्रो कार्यालय आएका हन् ।